I-Fayetteville, i-AR • Ukuhlikihlizwa komzimba ne-NuRu Massage
IFayetteville ingaphandle kweMountain Mountains, ekujuleni kwe-Ozark.
IFayetteville yidolobha lesithathu ngobukhulu e-Arkansas nesihlalo sesifunda saseWashington County. Idolobha lisenkabeni yedolobha futhi belilikhaya leNyuvesi yase-Arkansas selokhu kwasungulwa lesi sikhungo ngo-1871. IFayetteville ingasemaphethelweni eziNtaba zeBoston, ekujuleni kwe-Ozark. Ngabe siyazibuza ukuthi bathola kanjani ukugcobisa umzimba nokuhlikihla uNuru eFayetteville, AR ngalezo zikhathi?